Ihe ịhụ na obodo Atens | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Atenas, Obodo, General
Atenas Ọ bụ otu n'ime obodo ndị ahụ jupụtara n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị n'efu ka ọ sitere n'aka chi nwanyị Athena. Acropolis bu ebe anyi na –echeta ma anyi cheta Athens, obodo nke Gris oge ochie, bu ebe anyi ga eche na ibi ndu dika otutu otutu ndi gara aga. Mana Atens karịrị nke a. Ha bụ agbata obi na omenala ndị Gris nke a na-ebute n'akụkụ ọ bụla n'obodo.
Ọ bụrụ na ị na-eche gaa Atens ezumikeN’ezie, ị tinyeworị Acropolis na njem gị. O doro anya na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n’obodo ochie a, nke nwere nnukwu ụlọ nsọ oge ochie na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme ịmara. Ma anyị ga-agwa gị banyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-ahụ, n'ihi na Atens nwere akụkọ ihe mere eme mana otu bụkwa obodo jupụtara n'akụkụ nkenke na-adọrọ mmasị.
1 Ihe Acropolis
2 Plaka Old nkeji iri na ise
3 Gburugburu Monastiraki bi
4 Ihe ngosi sitere na Ugwu Lycabeto
5 Ama egwuregwu Panathenaic
6 Ode nke Herọd Atticus
La Acropolis nke Atens O zuru ezu maka otu njem ị gaa obodo a, nke ahụ bụ ihe kacha adọrọ mmasị ya, ebe onye ọ bụla chọrọ ịhụ ozugbo ha rutere Atens, nke kachasị mma bụ na anyị ga-ahụ ya nke ọma, n'ihi na ọ dị na bulie ugwu ma nwuo enwu n’abalị. Obodo a dị n'elu bụ ebe ebe ndị a na-anọ efe ofufe na ọnọdụ ya n'ihi nsogbu nchekwa, ebe ọ bụ na ebe ndị a dị elu dị mfe iji chebe. Ọ bụ eziokwu na Acropolis abụrụla nke e bibiri na nke nwere ọtụtụ narị afọ, mana site na ihe echekwara taa ma weghachite ya, anyị nwere ike ịmata otu oge dị na Gris oge ochie.
El Parthenon bụ ụlọ nnọchi anya kachasị ha nile, ebe edere ihe akpụrụ akpụ nke Athena Parthenos, onye nche obodo ahụ, nke tụtara mita iri na abụọ, nke na-anọghịzi. Na mgbakwunye, Parthenon a nwere nnukwu ogidi na friezes nke a na-ahụ ebe dị iche iche na-anọchi anya ya na agba zuru oke. Oflọ ọzọ a na-agaghị agbaghara bụ Erechtheion, nke nwere ogidi n'ụdị nwanyị bụ Caryatids, nke na-abụghị nke mbụ mana akwụkwọ. Ihe mbụ dị na New Acropolis Museum n'enweghị nsogbu.
Plaka Old nkeji iri na ise
Ozugbo anyị na-ahapụ Acropolis, anyị nwere ike na-aga site na Plaka obi, na kasị ochie n'ime obodo na taa otu n'ime ndị kasị njegharị. A mara mma ebe na cobbled n'okporo ámá na ochie ụlọ. Ebe zuru oke ịchọta ọtụtụ obere ụlọ ahịa nwere ihe ncheta na ụlọ mmanya na-ahụkarị obodo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmịkọ nke ezigbo ya n’Atens, nwee obi ụtọ na gburugburu Plaka.
Gburugburu Monastiraki bi
Ọ bụrụ na-amasị ndị agbata obi Plaka, na nso Acropolis, ị ga-ahụkwa Monastiraki, ebe dị ezigbo ndụ, dị mma maka ịzụ ahịa. Na ahịa monastirakAbụ m ihe kacha nso na souk ị nwere ike ịchọta, yana ụlọ ahịa ebe enwere ụdị edemede niile na ebe ị ga-abanye iji nweta ihe niile. N'ebe a, anyị na-ahụkwa ebe nwere ọbịbịa mara mma, dịka ụlọ alakụba Tzisdaraki ma ọ bụ Ọbá akwụkwọ Hadrian.
Ihe ngosi sitere na Ugwu Lycabeto
N’obodo ọ bụla bara nnu nnu, enwere ebe pụrụ iche iji lee panoramic anya na ya. N’Atens ọ bụ Ugwu Lycabettus, nke pụtara Ugwu Wolf, maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị biri na ya n'oge ochie. N'oge a, anyị nwere ike ịrịgo ije na enweghị nsogbu, mana maka ndị achọghị ịme mgbatị ahụ, ọ ga-ekwe omume ịrịgo n'ụgbọala ma ọ bụ egwuregwu. Ọ bụ ezigbo ngosi ma ọ bụrụ na anyị aga mgbe anyanwụ dara, n'ihi na enwere nnukwu echiche banyere Acropolis na obodo ndị ọzọ.
Ama egwuregwu Panathenaic
The Panathenaic Stadium bụ ihe dị mkpa maka egwuregwu Fans, na ama egwuregwu a bụ ebe ebe mbụ egwuregwu, na 1896. Ọ bụ ebe ihe atụ, ebe ọ bụ na otu ebe, na 330 a. E wuru obere ámá egwuregwu maka asọmpi egwuregwu. Ọbịbịa ahụ nwere ntuziaka ọdịyo iji mụtakwuo nkọwa banyere ama egwuregwu ahụ, anyị nwekwara ike ịga ije na ntanetị na ọbụnakwa n'elu ikpo okwu.
Ode nke Herọd Atticus
Buildinglọ a wuru dịghị ihe na-erughị n'afọ 161 na- eme ihe eji egwu egwu. Ọ bụ odeon nke dị na ala Acropolis, yabụ ọ dị nso na imirikiti ihe anyị chọrọ ịhụ. O nwere mgbidi marble, ma wuru ya dika ulo nke ihe dika puku mmadu ise. Ihe kachasị mma banyere oghere a bụ na taa mmemme na ihe nkiri ka na-eme na ya. Eziokwu bụ na iji hụ ya n'ime, ị ga-agakwuru otu n'ime ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ịhụ n’obodo Atens